Roob dabeylo wata oo laga cabsi qabo in ay ku dhuftaan Xeebaha Degaannada Puntland. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Roob dabeylo wata oo laga cabsi qabo in ay ku dhuftaan Xeebaha Degaannada Puntland. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Wararka laga helayo deegaanno ka tirsan gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland ayaa waxaa ay sheegayaan in laga cabsi qabo inay ku dhuftaan Roob dabaylo wato oo duufaanno ah, kuwaasi oo gaysan kara khasaaro isugu jira Naf iyo Maalba.
War qoraal ah oo ka soo baxay wasaarada beeraha ee maamulka Punland ayaa lagu sheegay in todobaadkan la saadaalinayo roobab mahiigaan ah oo ka da’aya gobollada Bari iyo Sanaag, islamarkaana ay ka dhalan karaan daadad lixaad leh oo khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba gaysan kara.
Qoraalka ayaa u qornaa sidan.
Previous Guddoomiye Mursal iyo Mahdi Guuleed oo ku biiray shirka ka socda Muqdisho – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Next WARKA SUBAX 8:00 AM (17-09-2020) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Plot To Kill Ex-Addis Ababa Mayor September 20, 2020